» दशैं नजिकियो, हलमा फिल्म कहिले ?
दशैं नजिकियो, हलमा फिल्म कहिले ?
४ आश्विन २०७८, सोमबार १७:५५
सरकारले फिल्म हल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको तीन साता बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म हलमा कुनै फिल्म प्रदर्शन हुनसकेको छैन । कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण दोस्रो पटक १६ वैशाखदेखि जारी निषेधाज्ञा भदौ दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा धेरै हदसम्म खुला भइसकेको थियो । तर, कुनै निर्माता पनि फिल्म प्रदर्शन गर्न तम्सिएनन् ।
२१ फागुनमा अर्को नेपाली फिल्म हलमा प्रदर्शन भयो । फिल्म थियो–‘गोर्खे’ । सो फिल्मले पनि हलमा दर्शक तान्न सकेन । ‘गोर्खे’ को व्यावसायिकता ‘यस्तो एउटा प्रेमकहानी’ भन्दा पनि नाजुक हुन पुग्यो ।
‘एकातिर हलमा ५० प्रतिशत मात्र दर्शक राख्नुपर्ने रे, अर्कोतिर कोरोनाको संक्रमण झन् बढ्दै गयो । फेरि लकडाउन हुन सक्ने संकेत पाएपछि रिलिजको एक साताअघि मात्रै स्थगित गरेका हौ,’ ‘कृष्ण–लीला’का कार्यकारी निर्माता रतन श्रेष्ठले न्युज कारखानासँग भने, ‘हामी त फिल्म प्रदर्शन गर्न तयार नै थियौ । तर, कोरोना भाइरसका कारण परिस्थिति गम्भीर हुँदै गएकाले अन्तिम समयमा ‘ब्याक’ हुनुपरेको हो ।’
‘एक त सरकारले अझैसम्म पनि उपत्यकाबाहिर हल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छैन । त्यसमाथि उपत्यकामा पनि ५० प्रतिशत दर्शक राखेर चलाउनुपर्ने रे, यस्तोमा करोडौ लगानीका फिल्म प्रदर्शन गर्ने मूर्खता कसले गर्छ रु,’ निर्माता सन्तोष सेनको भनाइ छ, ‘राज्यबाट न कुनै सहुलियत, सुविधा छ, न कुनै नीति नै । यस्तोमा रिस्क लिन सकिन्नँ ।’